प्रहरी र नागरिक सँगसँगै – News Portal
प्रहरी र नागरिक सँगसँगै
October 1, 2019 epradeshLeaveaComment on प्रहरी र नागरिक सँगसँगै
नेपालीहरुको ठूला चाडपर्व दसैँ, तिहार घरआँगनमा भित्रिसकेको छ । बिगतका वर्षझैं यसवर्ष पनि दसँै र तिहार नजिकिएसँगै घरभन्दा टाढा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु घर फर्किने क्रम शुरु भइसकेको छ ।
वर्षौदेखि टाढा रहेका अर्थात् छरिएर रहेका मनहरु जोडिने क्रमसँगै खुशियाली पनि छाइसेकेको छ । बजारमा किनमेल गर्नेबाहेक अरु विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेका गाउँ जान थालेपछि विस्तारै सहर विस्तारै शुन्य अवस्थामा पुग्न थालिसकेको छ । गाउँमा आफन्त, साथीसङ्गी भेटघाट भएर रमाइलो गर्ने क्रम शुरु भएको छ । तर चाडपर्व नजिकिएसँगै सुरक्षाका चुनौतिहरु पनि छन् ।
चाडपर्वको समयमा चोरी, डकैती, लुटपाट, जुवातासलगायत विभिन्न प्रकृतिका घटना घट्ने गरेका छन् । चाडपर्वमा हुनसक्ने विभिन्न आवान्छित घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायसँगै नागरिक पनि चनाखो हुन आवश्यक छ । सरोकारवाला निकाय र नागरिकको साझा सहकार्यले मात्रै भव्य र सभ्य चाडपर्व बनाउन सकिन्छ ।
वर्ष दिनमा एकपटक आउने नेपालीका ठूला चाडपर्वलाई कसरी भव्य र सभ्य रुपमा मनाउन सकिन्छ ? विगतमा भएका घटनाबाट पाठ सिक्दै यसवर्ष सुरक्षित र सभ्य चाडपर्व बनाउनका लागि सुरक्षा योजना के कस्ता छन् ?
आकस्मिक हुनसक्ने दुर्घटनाबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न कस्तो तयारी छ त ? लगायतका विषयमा जिल्लाका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रमुखसँगको कुराकानीको सारसंरक्षेपलाई राउण्ड टेबलको आजको अंकमा समेट्ने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ सारसंक्षेपमा गरिएको कुराकानी ।
सुरेश विक्रम शाह
डिआइजी (प्रदेश प्रहरी प्रमुख)
प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर
सबै चाडपर्व खुशी र हर्षको भएपनि सुरक्षाको चुनौति पनि हुन्छ । अझ विषेशगरी दसैँ र तिहारजस्ता चाडपर्व नेपालीका ठूला पर्व भएकै कारण पनि विशेष महत्वको रुपमा हेर्ने गरिएको छ ।
यो समयमा रमाइलोको नाममा गरिएका क्रियाकलापले विभिन्न घटना, दुर्घटना पनि निम्त्याइरहेको हुन्छ । चाडपर्वमा हुनसक्ने विभिन्न घटनालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई कसरी सुरक्षित र सुसंस्कृत पर्व बनाउन सक्छौँ भन्नेमा हामी गम्भीर छौँ । आम नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ । हाम्रो एक्लो प्रयासले मात्रै हुनसक्ने घटना दुर्घटनाको अन्त्य हुन सक्दैन् ।
चाडपर्व कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने आम नागरिकहरु पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ । यति भन्दैमा हाम्रो भूमिका हुँदैन् भन्न खोजिएको चाहिँ होइन् । हामी झनै तपाईहरुभन्दा अझ पनि गम्भीर छौँ । सकेसम्म मानवीय तथा भौतिक क्षति नहोस भनेर नै सुरक्षा रणनीति बनाएका छौँ । यसमा नागरिकको पनि साथ उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
प्रदेश नम्बर ५ मा १२ वटै जिल्लामा नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्नेमा म विश्वस्त पार्न चाहन्छु । चाडपर्वको समयमा विषेशगरी चोरीका घटना तथा विभिन्न सामाजिक अपराध, कुटपिटका घटना हुने गरेका छन् ।
त्यो सबैको कारण प्रमुख कारण नै मादकपदार्थ सेवन नै हो । चाडपर्वमा रमाइलोको नाममा हुने मादकपदार्थ सेवनका कारण ठूलो दुर्घटना घटिरहेको हुन्छ । प्रदेशमा हामीसँग भएको करिब ९ हजार जनशक्ति परिचालित छ । सहरदेखि गाउँसम्म नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गरून् भनेर हामीले विभिन्न कुना–कुनामा समेत प्रहरी परिचालनलाई व्यापक बनाएका छौँ ।
राजमार्गका विभिन्न स्थानमा जाँचमा कडाई पनि गरेका छौँ । अहिले घर फिर्ता हुनेक्रम चलिरहेको हुँदा पनि अहिले अलि बढी लुटपाटका घटना हुने गरेको छ । त्यसैका लागि पनि विषेश निगरानी बढाएका छौँ । अपराध न्यूनीकरण हुनेछ भन्नेमा म आमनागरिकलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
कुनै पनि घटना परिघटना नागरिकले पनि १०० मा फोन गरेर दिन सक्नुहुन्छ । जसले गर्दा अपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरणमा केही भएपनि सहज हुनेछ । सबै कुरा प्रहरी आफैले जानकारी पाउने कुरा हुँदैन् । कुनैपनि अवान्छित घटना हुन थाल्यो प्रहरीलाई फोन गर्नुस् । हामी जतिसक्दो तुरुन्त अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सफल हुनेछौँ ।
सुरक्षित अनुभूति गर्छन् नागरिक
सबैको साथ भएमा सफल हुन्छ